13. Kamma Paccaya | Dhamma Training Center
Aug 27 th, 2020
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Khamma condition)...
Apr 18 th, 2020
၁ – ကုသလတ္တိက ၇ – ပဥှာဝါရ ၁ – ပစ္စယာနုလောမ ၁ – ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Kamma condition) Kamma Paccayo Paccayaniddeso...
၁၃–ကမ္မပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ zawgyi ၄၂၇။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ကမ္မပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလာ စေတနာ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ ကမ္မပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁) ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ကမ္မပစ္စယေန ပစ္စယော။...
၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Kamma condition) (3 of 9)
၁၃–ကမ္မပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိနှင့် မြန်မာ zawgyi ၄၂၇။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ကမ္မပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု–၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား ကမ္မပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ကုသလာ စေတနာ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ ကမ္မပစ္စယေန...
၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Kamma condition) (4 of 9)
၁၃ – ကမ္မပစ္စယော zawgyi ဘ၀နှင့် ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ ကမ္မဟူသော ပါဠိကို မြန်မာဘာသာဖြင့် “ကံ”ဟု ခေါ်ကြပါသည်။ အမှု၊ အလုပ်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၏။ ထို အလုပ်သည် ကိုယ်အလုပ်၊ နှုတ်အလုပ်၊ စိတ်အလုပ်ဟူ၍ သုံးမျိုးရှိသည်။ ကိုယ်အလုပ်ဆိုသည်မှာ လက်ခြေစသော ကိုယ်အင်္ဂါတို့ဖြင့်...
၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Kamma condition) (5 of 9)
ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှင့်စေတနာသုံးတန် zawgyi ဒါနပြုရာ၌ ပုဗ္ဗ၊ မုဉ္စ၊ အပရစေတနာသုံးမျိုး အကြိမ်များစွာ ဖြစ်ပေါ်သကဲ့သို့ အခြားသော ပုညကြိယာ ၀တ္ထု၊ သုစရိုက်မှု၊ ဒုစရိုက်မှုတို့ကို ပြုလုပ်ရာ၌လည်း ထိုစေတနာသုံးမျိုးတို့ အကြိမ်များစွာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပေသည်။ ယင်းစေတနာသုံးမျိုးတွင် မုဉ္စစေတနာကို သန္နိဋ္ဌာပက စေတနာဟုလည်း ခေါ်သည်။ စေတနာသုံးပါးတွင်...
၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Kamma condition) (6 of 9)
ကံတူအကျိုးပေးပုံ ၀တ္ထုသာဓကများ ဇာတ်တော်များ၌ ကံတူအကျိုးပေးပုံမှာ များစွာ ပါရှိပေသည်။ ရှေးရှေးက စိတ်တူကံတူ ပြုခဲ့သော ကံတို့သည် နောင်အခါ၌လည်း အတူအကျိုးပေးတတ်ကြ၏။ ဒါနအတူပြုခြင်း၊ သီလအတူဆောက်တည်ခြင်း၊ အတူ ပြုခွင့်မရသည့် အခါ၌လည်း တစ်ယောက်ပြုနေသည်ကို တစ်ယောက်က သဘောကျခြင်း၊ အိမ်ရှင်လင် ယောက်ျား ပစ္စည်းရှာ၍...
၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Kamma condition) (7 of 9)
ကံ၏ အကျိုးပေးနိုင်စွမ်းလေးပါး zawgyi ကံအကျိုးပေးနိုင်စွမ်း ၄-ပါး ရှိ၏။ ၎င်းတို့မှာ- ၁- အမိအဖကို သတ်ခြင်း၊ ရဟန္တာကို သတ်ခြင်းစသည့် ပဉ္စာနန္တရိယကံသည် အကုသိုလ်ဘက်တွင် ဧကန်အကျိုးပေးမည့် အလွန်အားကြီးသည့် ဂရုကံဖြစ်သည်။ ၂- သေရာညောင်စောင်း လဲလျောင်းရာ သေခါနီးကာလတွင် အနီးကပ်ပြုသည့် အာသန္နကံ။...
၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Kamma condition) (8 of 9)
စိတ်စေတနာ ကံမျိုးစေ့ မျိုးစေ့တစ်ခုသည် ဆိုင်ရာသစ်ပင်ကို တစ်ကြိမ်ပေါက်ရောက်စေပြီးသည့်အခါ အသုံးမကျတော့ သကဲ့သို့ အတိတ်ကံက မြှုပ်နှံထားရစ်ခဲ့သည့် အရှိန်အဟုန်သတ္တိသည်လည်း ဆိုင်ရာအကျိုးကို ပေးပြီးသည့် အခါမှသာ အရှိန်အဟုန် ကုန်ခန်းလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် စေတနာ ကွယ်ပျောက်ရာ၌ တရားကိုယ်သာ ကွယ်ပျောက်၍ သူ၏ နာနာက္ခဏိကကမ္မ သတ္တိမှာ...
၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Kamma condition) (9 of 9)
ဥပတ္ထမ္ဘကကံ zawgyi အတိတ်ဘ၀များစွာက ပြုခဲ့ဖူးသည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ လူတိုင်းလူတိုင်း၌ ရှိပါသည်။ ထိုထို ကုသိုလ်၏ အကျိုးများ ရရှနိုင်ရန်မှာမူ ယခုပစ္စုပ္ပန်၌ ကုသိုလ်ပြီးကုသိုလ် မနားတမ်း ရေလာမြောင်းပေးသည့်နှယ် ပြုလုပ်သည့် ကံကို ဥပတ္ထမ္ဘကကံ Supporting Kamma ဟု ခေါ်၏။ ...
Dec 1 st, 2019
13- ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccaya (Kamma condition) Roman pali (1 of 6) Kammapaccayoti – kusalākusalaṃ kammaṃ vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Cetanā...
၁၃- ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccaya (Kamma condition) (2 of 6)
၁၃- ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccaya (Kamma condition) ပါဠိ၊ မြန်မာပြန် (2 of6) zawgyi ၄၂၇။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ကမ္မပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား ကမ္မပစ္စယသတ္တိဖြင့်...
၁၃- ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccaya (Kamma condition) (3 of 6)
၁၃- ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccaya (Kamma condition) (3 of 6) စေတနာ မမြင့်မြတ်ခဲ့သဖြင့် ကျွန်မဖြစ်ခဲ့ရရှာသည့် မပြည့် ကမ္မပစ္စယော = စိတ်အားထုတ်ခြင်းဟူသော အမူအရာအဖြစ်ဖြင့် စေ့ဆော်ခြင်းသဘောဖြင့် ကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်း ဆရာတစ်ယောက်၏ တပည့်ကြီးများသည်...
၁၃- ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccaya (Kamma condition) (4 of 6)
၁၃- ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccaya (Kamma condition) (4 of 6) သစ်ပင်တို့အား မျိုးစေ့လားသို့ဟု ကံကိုခိုင်းနှိုင်းသည် အားပါးထုတ်ထ လုံ့လသည်းစွာ (ဃ-၁) ကမ္မပစ္စည်းကို ရှေးရှေး ဆရာမြတ်တို့က “အားပါးထုတ်ထ လုံ့လသည်းစွာ”ဟု ဆိုထားပါသည်။ (၀)...
၁၃- ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccaya (Kamma condition) (5 of 6) zawgyi ဒေ၀ဒတ်လောင်းပုဏ္ဏား၏ မလှပသည့် ကံအကျိုးပေး (ဆ-၁) ကောင်းမွန်သည့် စိတ်စေတနာက ကောင်းကံမျိုးစေ့ တည်သွားသကဲ့သို့၊ မကောင်းသည့်စိတ် စေတနာဆိုးကလည်း မကောင်းသည့် ကံမျိုးစေ့ တည်သွားပါတော့သည်။...
၁၃- ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccaya (Kamma condition) (6 of 6)
၁၃- ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccaya (Kamma condition) (6 of 6) zawgyi ဥက္ကဋ္ဌုက္ကဋ္ဌ ၊ သြမကောမကကံများ ဥက္ကဋ္ဌ+ ဥက္ကဋ္ဌ = ဥက္ကဋ္ဌုက္ကဋ္ဌနှင့် သြမက+သြမက = သြမကောမက (ည-၁) ဥပမာ ဒါနကုသိုလ်ပြုစဉ်ကာလ၌လည်း...